Iibhokisi eziqinileyo, ibhokisi yokuPakisha, ibhokisi yebhokisi yezipho - iHanmo
Khuthaza umdla wakho malunga nobugcisa obubonwayo kwaye ubonwabele.
Ukubonisa nokutolika imisebenzi yobugcisa enomgangatho obalaseleyo kunye nokubaluleka kwembali,
Njengoko manfacturer sinako ukuxhasa OEM, ODM kunye R & Dsolution.
Siqinisekisa ukubonelela ngemveliso esemgangathweni kunye nenkonzo kuye wonke umlingani wethu.
Ngemveliso yobunzima eyenza ukuba umhla wokuhanjiswa ube mfutshane kakhulu.
Ukusukela ngo-2010, iHanmo imele ubuchule kunye nomgangatho. Sibonelela ngezisombululo zokupakisha ezma-nye zokupakisha kunye neemveliso zokuprinta. Siyazi ngokunzulu ukuba ukuze ume kwindawo yabathengi yanamhlanje, kufuneka ufikelele kwi "wow factor". Ngaphezulu kweminyaka eli-10 yokunikezelwa, uHanmo uzingca kakhulu ngokwazi ubuchule bokubamba ingqalelo yabathengi.
Umgangatho olungileyo wase China uMgangatho oPhakamileyo ...
Kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo, iRussia ifumene imveliso entsha yeLego Star Wars. Into kwibhokisi yesipho iyimfihlakalo, kodwa kubonakala ngathi yibhokisi ekhethekileyo eyilelwe yivenkile eqinisekisiweyo yeLEGO ngokusebenzisana ...
Yintoni inkqubo yokwenza ngokwezifiso ezakho ...
Ukupakishwa kwelebheli yabucala kuya kuba yinto eqhelekileyo kwezi ntsuku, ukusuka kwinkampani enkulu ukuya kwishishini elincinci, bonke bafuna ukuzenzela igama ngokwenkampani ngokupakisha kwayo. Njengoko upakisho yi ...
Ukuba ukupakisha kwakho kuboliswa ziintsholongwane okanye i-eco ...
I-Eco-friendly ngoku iba yinto, abantu abaninzi bayayikhathalela imihla ngemihla, njengoko sijamelene nokuphakamisa iintlekele ezibangelwe kukutshatyalaliswa kwendalo ngokwethu. Okwethu, njengomenzi we-pac ...
Ukupakisha kukhona njengokukhusela imveliso yangaphakathi, nangona kunjalo, ngophuhliso loqoqosho lwehlabathi, ukupakisha kufuneka kongeze ixabiso elongezelelekileyo. Ukuma kwindawo yabathengi yanamhlanje, ...